यस्तो ऐतिहासिक दिनमा समेत संसदमा अनुपस्थित हुने सांसद को को हुन ? « Kathmandu Television HD
काठमाण्डौं । शनिवार नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक दिन हो । वर्षौदेखि भारतले मिचेको भुमि समेत समेटेर मुलुकको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विद्येयकको पक्षमा मतदान गर्ने ऐतिहासिक दिनमा समेत दर्जन भन्दा बढि सांसद अनुपस्थित भए ।
मुलुकवासीले गौरव गर्ने दिनमा समेत जनताको पक्षमा मतदान गर्न संसदमा अनुपस्थित हुने सांसदको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि संसद बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरुले विभिन्न वहाना बनाइरहेका छन ।
यसले सांसदहरु संसद बैठकमाथि कति लापारबाही गर्छन भन्ने स्पष्ट भएको छ । अर्कोतर्फ शनिवारको ऐतिहासिक संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदमाथि विभिन्न शंका उपशंका समेत उव्जिएको छ ।
यस्तो ऐतिहासिक दिनमा समेत संसदमा अनुपस्थित हुने सांसद को को हुन त ?
हरिबोल गजुरेल, नेकपा, पुर्वमाओवादी, सिन्धुली, सरिता गिरी, ससफो, सिराहा, अमृतादेवी अग्रहरी, राजपा, कपिलवस्तु , गोपाल वहादुर बम, नेकपा, पुर्वएमाले, मुगु, दुलारीदेवी खत्वेनी, राजपा, सप्तरी, धनबहादुर बुढा, नेकपा, पुर्वएमाले, डोल्पा, नागेन्द्रकुमार चौधरी, नेका, सर्लाही, प्रमोद साह, राजपा, सर्लाही, शिवकुमार मण्डल, नेकपा, पुर्वमाओवादी, मोरगं, सूर्यनारायण यादव, ससफो, सप्तरी, सूर्यबहादुर केसी, नेका, कास्की, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, नेका, वाग्लुगं
विजयकुमार गच्छदार, नेका, सुनसरी, मोआफताव आलम, नेका, रौतहट, कृष्णबहादुर महरा, नेकपा, पुर्वमाओवादी , रोल्पा